မချစ်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့မလဲ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 27/11/2021 21:00 | စုံတွဲနှင့်လိင်
ငါတို့အားလုံးက အတူတူဘဲ ငါတို့လည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရတယ်၊ ဒါကြောင့် လမ်းခွဲတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ကို မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နည်းနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ပိုနည်းပါတယ်။ လိုချင်တာရှိရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မေ့လိုက်ပါ။ သူ မင်းကို မချစ်တာ ၊ လျှို့ဝှက်ဖော်မြူလာမရှိပါ။ အဲဒါကို လုပ်နိုင်ပေမယ့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်မူတည်ပြီး သင်အသုံးချနိုင်တဲ့ အကြံပြုချက် အတွဲလိုက်။
ရသောအခါ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်ဘဝတွင် အမှတ်အသားတစ်ခု ထားခဲ့သည်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လမ်းခွဲရမယ်၊ မေ့ပျောက်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ် များလိမ့်မယ်။ အခြားနေထိုင်မှုပုံစံကိုစတင်ပါ။. ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံး ကုစားနိုင်မလဲ နဲ့ အဲဒီ အဆင်မပြေတဲ့ အချစ်ကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနည်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်။
1 အဲဒီလူကို ဘာလို့ မမေ့နိုင်ရတာလဲ။
2 မင်းဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး အထဲမှာ မထားပါနဲ့။
3 အခြေအနေကို လက်ခံပါ။
4 ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပါ။
5 လမ်းပျောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာပါ။
6 သင်၏ 'အတွင်းစိတ်' ကို ခိုင်မာစေခြင်း၊
အဲဒီလူကို ဘာလို့ မမေ့နိုင်ရတာလဲ။
သံယောဇဉ်နှင့် တွယ်တာမှုသည် အဓိကအကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။ အဲဒါက အဲဒီလူကို မေ့ဖို့ ခက်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အခြားအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အားလုံး၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံစားလာရသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျော်ရွှင်သောလူများဖြစ်ကြပြီး ထိုလူအတွက်ပင် စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်သော အရာများကိုပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့က အဲဒီလူနဲ့ အချိန်အများကြီးကုန်ရင်၊ ထပ်လောင်းသောအချက်လည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိထားပြီး အတွေးအများစုက သူ့ဆီ ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့လို့မရပါဘူး။ အခုဒီမှာမရှိရင် အထီးကျန်သလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ ငါတို့လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။
လင့်ခ်နှင့် အချိန်များစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် မေ့ဖို့ခက်တယ်။ အကြောင်းအရာများစွာကို တူညီစွာမျှဝေခဲ့ပြီး အထူးဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပင်ရှိခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်ပျော်ရွှင်စေပါသည်။
မင်းဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး အထဲမှာ မထားပါနဲ့။
ဒီဟာက ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိန်းထားလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ပြောပြရကျိုးနပ်သည် သို့မဟုတ် မပြောထိုက်ဟု သင်ထင်သောကြောင့် သိမ်းထားလိုသော အရာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းဒါကိုယုံရမယ်။ အသိအမှတ်ပြုပြီး လွှတ်လိုက်ပါ။ မင်းကို အရမ်းကူညီလိမ့်မယ်။
မင်းကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင် ရှက်ဖို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ခံစားရတာတွေကို ရိုးသားဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့က မင်းကို မချစ်တော့ဘူးလို့ မင်းကို မရိုးမသားလို့ ပြောပါ။ သင်ယုံကြည်ရသူများထံမှ အကူအညီတောင်းပါ။မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းအစစ် ဒါမှမဟုတ် မင်းမိသားစုထဲမှာ။ ဝိညာဥ်နည်းနဲ့ လုပ်ချင်ရင် တရားထိုင်တာက အရမ်းကောင်းပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို မေ့ဖို့ ခက်လိုက်တာ အမှတ်ရစရာတွေက မင်းခေါင်းကို လွှမ်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုက အဲဒီအမှတ်တရတွေရဲ့ မျက်နှာမှာ ချစ်ခင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ဖိနှိပ်ရန် ခြေလှမ်းကို လှမ်းရန်မှာ ရှုပ်ထွေးသော်လည်း တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းကို လုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အမြန်ဆုံး ဖြစ်ရပါမည်။
ဒီဆက်ဆံရေးက မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ နိဂုံးချုပ်သွားတဲ့ အခိုက်အတန့်ကို သတိရပါ၊ ပြီးသွားပြီလို့ သူပြောခဲ့တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရင်တောင် ပြီးသွားပြီလို့ အတိအကျ တွေးရမယ်။ သင်ယုံကြည်မှုရှိရမည်။.
ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပါ။
မင်းရဲ့ အတွေးတွေက အဲဒီလူကို မထိတ်လန့်စေမယ့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပဲ။ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ ခံယူချက်ရှိရင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်နေစရာ မလိုဘူး။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းကို သိတယ်။ မင်းရဲ့ လှပတဲ့ အချိန်တွေကို ပေးလိုက်ပါ။ မင်းကိုဂရုစိုက်ပြီး မင်းကိုတန်ဖိုးထားပေးပါ။ သူ သို့မဟုတ် သူမနှင့် မဆုံစည်းမိစေရန် ကြိုးစားပါ၊ သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ရက်များက သင့်အား ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ရှောင်ရှားပါက သင် ၎င်းကို ရှောင်ရှားပါက သင်သည် ဒုက္ခများကို ရပ်တန့်စေမည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အချိန်က ပိုက်ဆံဖြစ်ပြီး အခု မင်းဒါကို မြှုပ်နှံထားရမယ်။ အတွေ့အကြုံသစ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ပါ။.
ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ရုန်းမထွက်ပါစေနဲ့ တုန်ခါမှု မြင့်မားနေပါစေ။ ဒါကို 'မပျောက်' လို့ ခေါ်ပြီး ဒီအတွက် လုပ်ရမယ်။ သင့်ကိုယ်သင် အများကြီးအာရုံစိုက်ပါ။. တတ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို ရှာဖွေပါ။ စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်။. ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို ရှာဖွေနေရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများကို ရှာဖွေကာ သင့်အား စိတ်ချမ်းသာစေမည့် အခိုက်အတန့်အားလုံးကို ပြန်လည်ဖန်တီးပါ။
သူတို့ဘဝလမ်းကနေထွက်ပြီး ခရီးကြီးထွက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် မြို့တွေကိုပြောင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ရှာတွေ့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဖို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတန်ဖိုးထားဖို့နဲ့ ဖြစ်ပျက်လာသမျှအားလုံးကို နာကျင်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲပေးဖို့ပါပဲ။
သင်၏ 'အတွင်းစိတ်' ကို ခိုင်မာစေခြင်း၊
ဆိုလိုတာက အထဲမှာ 'သင့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ'။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ မင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တယ်။. ငို၊ ကန်သွင်း၊ ဒေါသနဲ့ စိတ်ပျက်အားငယ်နေရမယ်၊ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းတော့ အတူတူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ချန်နယ်သို့ တတ်နိုင်သမျှ ငိုပြီး နေ့ရက်များ ကုန်လွန်သွားကာ အလင်းရောင်သည် သင့်အတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည်ကို သင်မြင်ရပါမည်။
ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောရမယ်။ "ဒါကို ငါမထိုက်တန်ဘူး""ဒုက္ခပေးစရာမလိုဘူး" ပြီး​တော့ ​တ​ဖြည်းဖြည်း ​ကောင်း​လာ​မယ်​လို့ ​ခံစား​ရ​လိမ့်​မယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ သင့်ဘဝ၏ လင့်ခ်အသစ်များသည် ထိုလူအကြောင်းကို သင်တွေးတောခွင့်မရှိတော့ဘဲ ၎င်းတို့အကြောင်းကို သင်တွေးနေသော်လည်း ထိုခံစားချက်များ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပေးရမယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အများကြီးချစ်ပြီး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ဝန်းရံပေးရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့မလဲ။